Matipi Ekufamba neWiricheya yako | Karman® Mawiricheya
Kufamba newiricheya inogona kurova tsinga kana ukasaronga mberi, kutsvagisa, kana kufunga nezvazvo zvinogona kuitika uye kunonoka nekuda kwekuremara kwekuremara. Semuenzaniso, haisi hotera yega yega kana motel ine kuwanika pawiricheya, izvo zvinogona kukonzera matambudziko kana uchifamba oga. Ive neshuwa yekubvunza nezve wiricheya kuwanika panguva yekuchengetedza mahotera.
Vaya vane nhare mbozha vanovimba nazvo rubatsiro rwemawiricheya kwese kwavanofamba, kupi inosanganisira yendege masevhisi, boating kana cruise pekugara, uye zvimwe masvikiro ekufambisa, senge matekisi, mabhazi, shuttles, uye kutasva paki yekuvaraidza. Funga kubvunza neaya masevhisi nezve inokwanisika ndege rubatsiro, maelevheti, uye ramp. Pamusoro pezvo, bvunza nemasevhisi aya nezvekurapa uye yakakosha zvishandiso zvemidziyo, senzvimbo dzakatemerwa ma defibrillator uye matangi e oxygen. Kutsvaga ruzivo urwu pamberi penguva kunogona kukusevha nguva nemari.
hwiricheya Kuchengetedza uye Kugadzirisa Paunenge Uchifamba
Kana iwe'kufamba ndega mu wiricheya, Saka ita shuwa kuti unayo kuchengetedza kana kugadzirisa basa simbisa izvozvo wiricheya iri mune zvakanaka kushanda mamiriro vasati vaenda. Iko kuwedzera kwekuedza kuchabvisa kudzosera shure uye kunonoka pamusoro pezvikamu zvakaputsika kana zvinogadziriswa zvinoda kushandirwa kwazvinoenda kana wasvika. Kuhaya timu yekuchengetedza kana yekugadzirisa inokuchengetedza nguva uye kudzikisira kushushikana uri parwendo.
Chengetedza nekuisa zita rako nekero pane chimwe nechimwe chezvikamu zvinotsvedza usati wabva pamba. Ratidza chete zita rako kana kufamba mhiri kwemakungwa.
Zvakare, uyai neraizi yekufambisa yekugadzirisa kit ine zvese zvishandiso zvinodiwa uye zvinhu zvinodiwa kuchinja mweya wekufema. Pneumatic tire yekugadzirisa kits inogona kuwanikwa kune chero makuru makuru ezvitoro zvitoro muchikamu chebhasikoro. Rangarira kuti haazi ese mashopu ekugadzirisa epasi rese akafanana nebasa rawajaira kugamuchira kumba, saka ita zvese zvaunogona kuti udzikise zvinogona kuitika matambudziko nekuita izvozvi.
Matipi eGungwa Kufamba
Cruise mashandiro anowanzo sanganisira feri masevhisi kune kutakura vafambi kumahombekombe kubva muchikepe chakasungirirwa mugungwa. Aya masevhari masevhisi haagari akashongedzerwa nema lift kana ramp kubatsira vakaremara kudzikisa yavo mawiricheya kupinda mutakuri. Kumbira vashandi ve rubatsiro mukutsvaga chero pekugara pawiricheya kuitira kukwira chikepe uye kuendesa kumahombekombe.
Zvichienderana nemamiriro ekunze, gungwa, mafungu mamiriro, kana kunetsekana kwehunyanzvi, zvimwe zvirambidzo zvingave zviripo zvinogumira zvimwe vafambi kubva pakusiya cruise nyoro. Kazhinji, vashandi vanokutungamira kune gangway kana kushandisa chinokambaira chinokambaira, chigadzirwa chinogadzirwa chakagadzirirwa "kufamba" kwako wiricheya pasi kukwira masitepisi, kubatsira nhare yakakwenenzverwa kuwana nzira yavo yekuenda kumahombekombe.
Vakaremara vanhu vanozoda chinja to a lightweight, bhuku wiricheya kana pakutanga mu wiricheya yemagetsi kana sikuta kuitira kuti vashandi vabudirire kufambisa iyo zvishandiso pane mahombekombe. Ive neshuwa yekuzivisa vashandi nezve chero mushonga kana michina yakakosha izvo zvinodawo kutamiswa padhuze neyako wiricheya kana sikuta.
Matipi Ekufamba Kwemhepo
Vanhu vazhinji vanotenda izvozvo ndege kugadzirisa vanofamba newiricheya; zvisinei, vamwe yendege services vakaregeredza kutora imwezve simba yekuvimbisa kuti masevhisi aya anoitwa kudzikisira kukuvara kunogona kuitika kune avo vakavharirwa nharembozha. Muchokwadi, chero ndege inogona kukonzera matambudziko anogona wiricheya vafambi, zvinoenderana nenguva uye zuva rekuenda nendege kwairi kuenda.
Uyezve, the unhu of rubatsiro rwemawiricheya inovimba zvakanyanya ne ndege vashandi uye vashandi vepaairport vanoburitsa yako midziyo uye mukwende. Simbisa yako ndege nendege nemutakuri mukati maawa makumi maviri nemana kusvika makumi mana ekuberekwa. Nguva dzendege, nhamba, uye zvigaro zvekugara zvinogona kuchinja pane zvaunoda. Zivisa iyo yendege sevhisi timu nezve yako kuremara. Uyezve taura mhando ye wiricheya une, nezvimwe midziyo izvo zvinoda kutakurwa pakusvika. Kumbira "cheki cheki" kuitira kuti utakure yako wiricheya yakananga kune fuselage yendege. Ive neshuwa yekubvisa ese makumbo anotsigira uye chigaro makushiti usati wapa yako wiricheya kune vashandi vendege. Takura zvinhu izvi uende nazvo pa ndege. Shandisa mabhegi akasarudzika ekuchengetera zvinhu zvakapfava pakati pekuchinja.
Yakakwana Rondedzero yeZviwanikwa zveMazano pa Kuenda neWako hwiricheya:
Kufamba neWiricheya Yako kana Scooter
Kubhururuka Matipi evashandisi veWiricheya
Maitiro Ekufamba Nemhepo neWiricheya
Mhepo Yekufamba Matipi eWiricheya kana Scooter Vashandisi
Akaremara Mufambi Wericheya - Mazano eZororo
Kufamba neWiricheya Yako
Kufamba nehurema kana Hutano Kurapwa[PDF]
Mazano Akaremara Vafambi [PDF]
TSA: Vafambi Vakaremara uye Mamiriro Ekurapa
Matipi mashanu Ekufamba nehurema
Kugara Kwemunharaunda: Kufamba nemaWheelchair
Kufamba Nebasa Rembwa
Ichi chinyorwa chinounzwa kwauri ne 1800wiricheya; tinopa mavhiripu.